Ihe omumu nke imebi na 2020, na udi nke emere ya | Martech Zone
Ihe omumu nke imebi na 2020, na udi nke mere ya
Tuesday, August 11, 2020 Tuesday, August 11, 2020 Michael Della Penna
COVID-19 agbanweela ụwa ahịa. N'etiti mgbochi ndị na-ekewapụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ewugharị usoro oge nke omume ndị ahịa n'otu ntabi anya. N'ihi ya, gafere ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ụdị kọrọ mbelata ke revenue.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọbụlagodi n'oge ọgba aghara ahụ, ndị America nọ na America ka gosipụtara ọtụtụ mgbasa ozi 10,000 kwa ụbọchị, ebe ọtụtụ ụdị mepụtara onyinye ha. ọhụrụ kwesịrị ma lelee anya idobe Ekekọrịta Olu na nha oke ahia. N'ezie, ekwenyere m na ọ bụrụ na anyị eleghachi anya n'oge a n'oge na-adịghị anya, anyị ga-eju anya na imepụta ihe na ọgụgụ isi nke ọtụtụ ụdị ndị ahịa na-eduga iji gbanwee ma jikọọ na mkpa ndị ahịa. COVID-19 mere mmekọrịta dị irè na gburugburu ebe a na-enweghị mgbagwoju anya na nke a na-ejighị n'aka, ọ kachasị njọ maka ụdị, bụ ndị na-enwe nrụgide dị ukwuu iji nweta oke. Otu mpaghara dị mkpa bụ na ike ha iji belata ozi site na iji ozi dị ike, ezubere iche, na nke metụtara hyper.
Ebe ọtụtụ ndị America nọwapụrụ onwe ha iche n'ụlọ ha na n'okporo ụzọ ụkwụ na Main Street kwụsịrị, ọdịmma ndị ahịa gbanwere. Ọchịchọ maka ọrụ nkwanye mmiri, akụrụngwa mgbatị, nnyefe nri, na ịzụrụ ihe ọ alcoholụ rapidlyụ na-aba n'anya bilitere ngwa ngwa ka ndị America na-ele anya ka ha dịrị mma ma nwee obi ụtọ mgbe ha na-eri nri site na ụlọ oriri na ọ theirụ favoriteụ kachasị amasị ha. Maka ndị mgbasa ozi, mmeri n'oge a "ọhụụ" nke omume pụtara ịmegharị ihe mgbaru ọsọ, ebumnuche, na ụzọ iji zute ndị ahịa ebe ha nọ ma nyefee uru na usoro ha.
Kwa afọ, InMarket chọpụta mkpọsa pụtara ìhè na-egosipụta njikọta zuru oke nke nka na sayensị iji mebie ọgbaghara na imepụta oge dị egwu. Ndi mmeri mbu nke 2020 putara ihe karie n'ihi onodu di iche iche anyi na eche ugbua. Ihe ịga nke ọma ha n'ọtụtụ ụzọ nwere ike ịdị ka ikike ha nwere iji weghara oge ahụ ma jikọta oge, mkpa, na gburugburu ya iji kpalite oge na ahụmịhe pụrụ iche.
N'okwu ọ bụla, akara ngosi pụtara ìhè jikọtara ya na ndị na-eri nri na ọkwa miri emi, ọ ga-abụ ọchịchọ ịpụ n'èzí ma nakweere akụkụ ha N'onwe Gị ma ọ bụ site na ịnye uru n'oge oge akụ na ụba a na-ejighị n'aka. Ọmụmaatụ, ụdị dị ka Jameson na Contadina, pụta ìhè na Oge Mmepe, kpaliri ntakịrị agụụ na nkasi obi n'ichetara anyị oge dị mfe, nke obi ụtọ.
Na njedebe, mkpọsa ndị a na-emeri bụ nnukwu ngosipụta nke ọnọdụ anyị na ọhụụ ọhụrụ, na-eme ka a na-ahụkarị ya na Ndenye Pịa-Site (CTR) - dị ka 18.1% - karịa 30 ugboro elu karịa akara ụlọ ọrụ.
N'ozuzu maka ụdị ndị na-achọ ijikọ ma mee ka ndị na-azụ ya ihe kachasị mma iburu ihe ndị a n'uche:
Nzipu & Oge
Ahịa dabere na ọnọdụ na-emesi oge maka ndị mgbasa ozi ike karịa ihe niile. Mgbasa mgbasa ozi ndị nwere oge ọhụụ nwere ihe niile: ha na-etinye ndị ahịa ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị na ọwa kwesịrị ekwesị gụnyere ntanetị na ụlọ ahịa - mgbe ha nọ na usoro ịzụta.
Na etiti mkpọsa ọ bụla dị elu bụ izipu ozi na ihe okike. N'ọnọdụ ọ bụla, ihe okike ndị a kachasị elu abanyela na ọnọdụ nnukwu macro ma bụrụkwa ụzọ ụfọdụ siri ike njikọ siri ike na ọdịnala - dịka Jameson's Patrickbọchị St. Patrick Weta Ogwe Homelọ.
Oge nke ọ bụla nwere ihe ịga nke ọma n'iwe ndị na-azụ ahịa ihe ngosi dị ike gụnyere ihe nkiri, mmekọrịta yana oyiri dị ike.
Ozi & Nye
Na njedebe nke ụbọchị, onyinye na ọdịnaya ọdịnaya ọ bụ ego, ụgwọ ọrụ ma ọ bụ ozi ngwaahịa gụnyere uru ngwaahịa. Nke a dị ezigbo mkpa na ọ bụrụ eziokwu n'oge enweghị ọnọdụ akụ na ụba. Oge kachasị elu nke ọkara mbụ nke afọ jikọtara akara ngosi na ozi sitere na uru sitere na nri abalị nri abalị emere, malite na $ 3.75 kwa onye, ​​ka Kọntaktị'Kupọns dijitalụ nke ịzụta nnukwu.
Ọ bụ ezie na 2020 bụ n'ezie oge a na-enwetụbeghị ụdị ya na akụkọ ntolite anyị, mmetụta nke ihe omume gbara COVID-19 nyere aka ịkwalite na ikekwe ịkwalite arụmọrụ nke ndị mmeri anyị Breakthrough Moments. Agbanyeghị, n'agbanyeghị ọnọdụ mpụga, ụdị ndị na-anọgidesi ike n'ibute mkpa ndị ahịa na mbụ, nnabata nnapụ na oge nke ozi ha gburugburu mkpa ndị ahụ - ọkachasị n'oge na n'oge usoro ịzụta ma wuo ihe okike iji izi ozi bara uru ga-aga nke ọma. site na.
Budata InMarket Breakthrough Moments 2020
Tags: onye oru ugboCOVID-19okikectrinmarketInMarket Breakthrough Obere ogeInMarket Breakthrough Obere Oge 2020jamesonòkè nke ahịaòkè nke olu
Michael Della Penna bụ Chief Strategy Officer na InMarket. Michael nwere ihe karịrị afọ 25 na-arụ ọrụ na data, mgbasa ozi dijitalụ, na ụlọ ahịa ahịa. Achọpụtala Michael dị ka otu n'ime Magazin B-to-B "Ndị mmadụ 100 kachasị emetụta na azụmaahịa azụmaahịa na mmekọrịta mmekọrịta" ugboro ise maka onyinye ya na-aga n'ihu iji guzobe usoro kachasị mma ahịa dijitalụ.
Ọdịnihu nke B2B Ahịa: Bgwakọta N'ime & n'èzí Otu